.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: မျိုးကြီး Songs Collection
မျိုးကြီးသီချင်းတွေကိုပဲ သီးသန့် စုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ သီချင်း ၂၁ ပဲ တင်ထားရပါသေးတယ်။
နောက်နေ့တွေကျမှ တစ်ဖြေးဖြေးခြင်း ထပ်ပြီး တင်ပေးသွားပါမယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ နားထောင်ချင်တဲ့ မျိုးကြီး သီချင်းတွေရှိရင်လည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
1 အမေ မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
2 ရင်ခုန်သံအရင်းနှီးဆုံး မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
3 သူစိမ်းတစ်ယောက် မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
4 လက်ခံပေးပါ မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
5 အပြာရောင်ည မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
6 ဘာအကြောင်းကြောင့် မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
7 ဆက်ရန်မရှိ မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
8 ရန်သူတစ်ထောင် မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
9 ကျွှမ်းလောင်ခြင်း မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
10 ကြယ်တွေကြွေသွားသည့်တိုင် မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
11 အဆိပ်ခွက် မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
12 ကျောက်စာများ မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
13 အိပ်ဖန်စောင့် မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
14 အချိန်မှီသာပြင်ဆင်ခွင့်မရှိခဲ့ရင် မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
15 လွမ်းတဲ့စိတ် မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
16 ဖန်ဆင်းရှင် မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
17 လေပြေ မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
18 အပြစ်တစ်ခုဖန်ဆင်းခြင်း မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
19 ဓါတ်ပြားဟောင်းကြီး မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
20 မလာပါနဲ မျိုးကြီး Click Here !! 2.00 MB
21 ဒီကစောင့်နေသူ မျိုးကြီး၊အငဲ Click Here !! 2.00 MB